IMEX America ji ebumnuche na ịdị mma na -ele ọdịnihu anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » IMEX America ji ebumnuche na ịdị mma na -ele ọdịnihu anya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Iwughachi • Tourism • Akwụkwọ akụkọ USA
Ngụgụ dị! IMEX America ga -emepe n'ime izu ole na ole na -ebute ya ọtụtụ ohere azụmaahịa, nnọkọ mmụta na ohere maka ụlọ ọrụ - n'ikpeazụ - jikọọ ọzọ. Ihe ngosi a, nke na-eme na Nọvemba 9-11 na Las Vegas, nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụụ yana mmemme mmụta nke ọrịa na-efe efe kpụrụ nke ọma yana nnọkọ gbasara otu esi ewulite nke ọma na ọdịnihu dị mma. Nchikọta maka ụlọ ọrụ ihe omume azụmaahịa ga -abụ nke pụrụ iche ka IMEX America na -eme emume mbipụta iri yana ụlọ ọhụrụ, Mandalay Bay.
Ndị na -azụ ahịa nwere ike izute ndị na -ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ gbasara akụkụ niile nke ụlọ ọrụ na IMEX America.
Ihe ruru puku ndị na -azụ ahịa akwadoro ka akwadoro iji IMEX America dị ka ikpo okwu ịmalite azụmahịa.
Ndị otu IMEX ewepụtala usoro agụmakwụkwọ zuru oke nke na -enye ìhè maka ọdịnihu ngalaba ahụ yana otu esi ewulite ọganiihu nke ọma.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3,000 ndị na -azụ ahịa akwadoro ugbu a site n'ofe North America na ụwa ndị ọzọ, gbakwunyere ọtụtụ narị ndị na -azụta ihe - nke ukwuu na USA - ha niile na -eji IMEX America dị ka ikpo okwu ịmalite azụmahịa. Azụmaahịa ka na -aga n'ihu ihe ngosi ahụ na ndị na -azụ ahịa nwere ike izute ndị na -ebubata ngwaahịa zuru ụwa ọnụ gbasara akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị a gụnyere obodo Europe, Austria, Belgium, Czech Republic, Croatia, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Malta, Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, Scandinavia, na UK. Australia, Korea, Japan, New Zealand, na Singapore so na mba Asia-Pacific nke Kenya, Morocco, Rwanda, na South Africa si Africa. Site n'Atlanta na Calgary ruo LA na Vancouver, ndị ngosi US na Canada na -arụ ọrụ. Ha sonyeere ọtụtụ ebe Latin America gụnyere Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, na ndị ọzọ.
Ụdị ụlọ oriri na nkwari akụ mba ụwa niile na -aga gbakwunyere ọtụtụ obere ụlọ nkwari akụ, ọnụ ọgụgụ ndị na -eweta teknụzụ na -abawanye kwa ụbọchị. Na -atụ anya ịhụ Cvent, EventsAIR, Hopin, Swapcard, RainFocus, na MeetingPlay n'etiti ndị ọzọ.
Nzube & Ezi
Na -eburu n'uche na nkà chọrọ mmelite mgbe afọ siri ike gasịrị, ndị otu IMEX ewepụtala usoro agụmakwụkwọ zuru oke nke na -enwupụta ọdịnihu nke ngalaba na otu esi ewulite n'ihu nke ọma. Mmemme mmụta n'efu na IMEX America na -ebido na Smart Monday, nke MPI kwadoro, na Nọvemba 8 nke gụnyere agụmakwụkwọ raara onwe ya nye maka mkpakọrịta, ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ. Mmụta ahụ na -aga n'ihu n'usoro ọmụmụ ihe, tebụl isiokwu dị ọkụ na nzukọ ọmụmụ n'ime ụbọchị atọ nke ihe ngosi ahụ - haziri maka ilebara ụdị mmụta dị iche iche anya. A na -ahazi nnọkọ n'ime egwu ọhụrụ, gụnyere imepụta ihe na nkwukọrịta, Diversity na accessibility, Innovation and tech; Iweghachite azụmaahịa, mkparita ụka nkwekọrịta, akara onwe onye, ​​na nkwado.
Ndị otu Hilton na -atụle omume kacha mma ha nabatara n'ime afọ gara aga Iweghachite ebumnobi-Ngwọta a na-ahụ anya maka imepụta na ime ka ihe na-eme n'ụwa ajọ ọrịa. Marin Bright sitere na Nzukọ Smart na -ekerịta '' akwụkwọ ntuziaka ihe ịga nke ọma COVID '' nke na -ekpuchi mmepụta mgbasa ozi, ihe nkwekọrịta dị mkpa na atụmatụ nkwukọrịta n'ime Njikọ ọla ọcha: izute nkuzi ndị ọkachamara site n'oge COVID. Ndị otu Maritz ga -enyocha mmụta ha site na ọrịa ọjọọ wee kọwaa etu onyinye teknụzụ ọhụrụ nwere ike isi kwado ihe omume nke ọdịnihu Ọgba aghara n'oge mgbake: Maritz na -eweghachi ahụmịhe ihe omume site na teknụzụ ọhụụ.
Kedu otu anyị ga -esi chegharịa nzukọ na ihe omume site na ahụmịhe nkeonwe? Nke ahụ bụ ajụjụ Derrick Johnson jụrụ na nnọkọ yaOzi dị oke mkpa: Ọdịnihu nke ahụmịhe na afọ dijitalụ na ndụmọdụ maka otu esi etinye ndị na -ege ntị "digitally distracted". Ịgwakọta dijitalụ na anụ ahụ bụ ihe a na -elekwasị anya Ihe omume ngwakọ na -agafe oke maka ahụmịhe anụ ahụ na dijitalụ. Na nnọkọ a, Dax Callner, onye isi atụmatụ atụmatụ na Smyle, na -ekerịta echiche na -arụ ọrụ na imepụta ahụmịhe na ịkparịta ụka n'Ịntanet maka ndị sonyere na -esonye na ntanetị (URL) yana na ntọala anụ ahụ (IRL).
Mkparịta ụka di iche iche
Oge erugo iwepu ajọ mbunobi na ịnabata ụdị dị iche iche - na ụlọ ọrụ ihe omume azụmaahịa nọ ebe dị mma iduzi site na ihe nlereanya. Ya mere, ndịiche dị iche iche na -etolite isi na agụmakwụkwọ, ihe omume na atụmatụ ọhụrụ nke IMEX America.
She Means Business, ihe omume jikọrọ ọnụ nke IMEX na magazin tw, nke MPI kwadoro, na -enyocha ụdị dị iche iche, nha anya nwoke na nwanyị na inye ike ụmụ nwanyị. A bịa na okwu ndị a, ụmụnwanyị na ụmụ nwoke na -ekwukarị gbasara ibe ha, mana ọ bụghị ibe ha. Nke a ga -agbanwe n'ime Nhọrọ ụmụ nwanyị: Mkparịta ụka gbasara ụdị na nha anya nwoke na nwanyị ebe Michelle Mason nke ASAE na onye ndụmọdụ Courtney Stanley na -akpọ ụmụ nwoke abụọ ka ha nwee mkparịta ụka. Enwekwara ohere isonyere ndị otu obere mkparịta ụka ya na ụmụ nwanyị ndị na -eso ụzọ na mpaghara ha. Ashly Balding, Associated Luxury Hotels International; Meg Fasy, Ihe omumeGIG; Tracy Stuckrath, mee nke ọma! nzukọ & ihe omume; Juliet Tripp, Watch Chemical; na Nisha Kharé nke Human Biography ga -ekerịta Nkuzi ndu site n'aka ndị isi ụmụ nwanyị.
Oge agụmakwụkwọ na -enyocha ihe ndị ọzọ dị iche iche gụnyere Ịnabata ndị nwere nkwarụ na mmadụ na nzukọ na mmemme na Itinye n'ọrụ: Ọdịiche nke agbụrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ ihe omume ebe Cheerful Twentyfirst's Elena Clowes na -akọwapụta nchoputa nke akwụkwọ nyocha ụlọ ọrụ gbasara ụdị agbụrụ dị iche iche.
The ọhụrụ IMEX | Ndị EIC & Obodo Obodo n'elu ụlọ ngosi ga -akwado nkwado, ịdị iche iche, mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya na inyeghachi ya. Ndị mmekọ gụnyere LGBTMPA, ECPAT USA, Ihe dị iche iche maka njem nlegharị anya, Fundlọ Ọrụ Mmemme, Nzukọ pụtara Business, SEARCH Foundation, Above & Beyond Foundation, na hichaa ụwa. Ndị otu KHL ga -akpọkwa ndị bịaranụ ka ha wuo klọb - oghere egwuregwu pụrụ iche maka nwatakịrị na -arịa ọrịa na ndị enyi ụlọ akwụkwọ ya.
Ihe omume mmekọrịta na -enye ọmarịcha & ihe ịtụnanya
Ọ bụ ezie na ihe nkiri a ka bụ ebe azụmaahịa na mmụta, enwerekwa ọtụtụ ohere ijikọ na mpụga ụlọ ihe nkiri. Njem nlegharị anya na -enye ihu ala na Las Vegas ma ọ bụ nri kacha mma, ahụmịhe omimi ma ọ bụ egwu dị n'ime ebe ngosi abụọ: Ogige Siza na Mandalay Bay. Enwekwara ihe na -eme ememme mgbede na saịtị Nite na -eme na Resorts World ọhụrụ, mmemme mbinye aka nke MPI Foundation na Drais na EIC Hall of Leaders na MGM Grand.
"Ọtụtụ ndị mmadụ akpọla IMEX America ''homecoming maka ụlọ ọrụ, 'anyị enweghị ike ichere ịnabata ndị obodo anyị maka ihe atọrọ ka ọ bụrụ njikọta pụrụ iche. Ebe m si njem Las Vegas lọta n'oge na-adịbeghị anya, ahụla m mbụ ka anyị na ndị mmekọ anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ-gụnyere obodo anyị nọrọ na ebe mgbakọ ọhụrụ-iji gosipụta ihe ngosi adịghị mma mana ọ nweghị isi. Ndị bịaranụ nwere ike ịtụ anya mmetụ IMEX mara mma dị ka akụkụ nke ahụmịhe ngosi, ”Carina Bauer, Onye isi oche nke IMEX Group, na -achịkọta.
IMEX America na-eme Nọvemba 9-11 na Mandalay Bay na Las Vegas na Smart Monday, nke MPI kwadoro, na Nọvemba 8. Ịdebanye aha-n'efu-pịa Ebe a. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara nhọrọ ụlọ na akwụkwọ, pịa Ebe a.